by Sydney Mangweka March 28, 2020 1289
Mukuru weNyika President Emmerson Mnangagwa nezuro vakaparura chirongwa chekudzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti vambomira kuenda kumabasa nekushanya zvisina mwero zvichiteera kupararira kwechirwere checoronavirus (COVID-19) icho chauraya vanhu vanodarika 27,430 pasi rose.
Munyika yedu yeZimbabwe parizvinho makave nekuparara kwehupenyu hwemunhu mumwe chete pavanhu nomwe vakavhenekwa nemishina ino ongoroora kuti anehutachiwana hwe coronavirus ndiani. Hurumende inoti vanhu vanogona kuongororwa vane chirwere checoronavirus vanogona kuwedzera zvichienderana nokuti vanenge vavhenekwa nemishina vawandawo zvakadini.
Kuburikidza nedambudziko raramba rakamomotorera nyika dzose pasi rose kusanganisira Zimbabwe, vaMnagnagwa vakaparura zvirango zvechimbi chimbi, kuedza kuti dambudziko recoronavirus rigomiswa.
Danho rakatorwa nemukuru wenyika idanho rakakosha pakudzivirira chirwere ichi muruzhinji asi richaomesera ruzhunjiwo rweZimbabwe runorarama nebabasa emabhindauko. Tichitaura na Susan Muchabveyo uyo anotengesa pamusika weSakubva Flea Market anoti, ‘Upenyu hwake nemhuri yake hwave kuzoenda pakaoma’. Susan anoti anorarama nekutengesa mbatya, zvino akatadza kutengesa nhumbi idzi anoshaya pokutangira.
Zvichakadaro izwi, mune zvirango zvakaparurwa nemukuru we nyika vaEmmerson Mngangagwa, vanoti;
Chirwere che coronavirus chonofamba nekuburikidza kwekufamba nekusangana kunoita vanhu mumisha nemumabhindauko kwavanoswera. Naizvozvo nzira imwe chete, chete inogona kumisa kufamba nekupararira kwechirwere ichi, kumisa kufamba kweruzhinji.
Naizvozvo, Zimbabwe ichasvika mukuvhara mishando nemabhindauko ose kwemavhiki matatu zvichitarisirwa kuti chirwere checoronavirus chinge chamira kupararira. Mumazuva emasvondo matatu aya anotangira muvhuro 30 Kurume 2020, vanhu vanotarisirwa kugara mumisha yavo vasingasangani neruzhinji rwavanhu.
Vanhu havatirisirwa kubuda mumisha yavo, kunze kwekunge vachinotenga zvokudya, kuenda kuchipatara kana kunoviga vashakabvu.
Vatyairi vedzimota vanenge vakamira pamitsetse yekumwa dhiziri nepeturi havatenderwi kubuda mumotokari dzavo.
Vanhu havatenderwi kuita misangano inodaidza ruzhinji rwavanhu.
Matanho aye nemamwe matanho akaparurwa nehurumende yava Emmerson Mngangagwa ainotarisirwa kuti abatsire zvikuru kuderedza vanobatwa nechirwere checoronavirus icho chisati chawana mishonga yekudzivirira kana kuchirapa.
Munguva yakadai, mumwe mugari wemuSakubva Philip Mazaiwana anoti hupenyu huchaomera ruzhinji nekuti ruzhinji rwavanhu runorarama seshiri dzinodya zvadzatsara zuva iroro. Zvisinei mamwe papazi ehurumende dzemaguta (City Council) vanogadzira nekuparura magetsi enyika (ZESA), vanopa masaisai emafoni, (Mobile and Telecommunications Companies) vamawairesi, zvibvitibviti, zvipatara nemabhazi eZupco vachange vachishanda kurerutsa izvo zvingave zvichida hunyanzvi hwavo. Munguva iyi, Kumakomo Community Radio Station, ichange yakavhara mahofisi ayo, kuitira kubatsirana neruzhinji mukuderedza kufamba kwechirwere checoronavirus. Zvichakadaro, Kumakomo Community Radio Station, ingenge ichiramba ichiita basa samazuva ose, kutapa nekuparura nhau dzenharaunda uye dzimwe nzvimbo dzokunze dzinobata magarira nemararamiro avanhu. Basa iri rinenge richiitwa mashoko achifambisa kuburikidza nemaSocial Media peji edu anosanganisira WhatsApp, Twitter, Instagram ne dande mutende redu rehindaneti rinoti www.kumakomofm.org